Ibsa ABO irraa kenname fi Qindeessaa Muuziqaa fi Weellisaa Dinqiisaa Dabalaa Waraana PP_n Hidhame – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosIbsa ABO irraa kenname fi Qindeessaa Muuziqaa fi Weellisaa Dinqiisaa Dabalaa Waraana PP_n Hidhame
“Filannoon Filannoo caalu nagaa Ummataati!”
#Diddaan poolisii Oromiyaa ammas itti fufee jira!
Goodina Addaa naannawaa Finfinnee Sulultaatti Hogganaan Biltsiginnaa Obboo #Fiqaaduu_Tasammaa fi J. #Hayluu_Gonfaa poolisii Humna Addaa Oromiyaa waliin guyyaa har’aa marii irra turan.
Marii kana irratti “Shanee fi Girrisatu biyya keenya nagaa dhoowwaa jira. Tarkaanfii irratti fudhadhaa” yeroo jedhaman poolisiin Oromiyaa tokko akkas jedhee haasaa godhe: “Shanee fi Girrisa kana walii wallaallee jirra. Ummatni Oromoo dararaa bara wayyaanee caalu keessa jira. Maqaa shanee fi girrisaatiin Ummata hidhuu fi dararuun hafee osoo karaa nagaan rakkoo jiru abbootii Amantaa fi Abbaa gadaa qabadhaa warra #Hidhaa jiraanii fi warra #Bosona jiran waliin mari’adhaa rakkoo jiru furaa” jedhee dubbate.
Kana malees “Ummatni keenya ilmaan isaa itti wareegee wayyaanee irratti qabsaaye ammas hidhamuuf ajjeefamuu hin qabu. Kana ta’uu baannaan nutis xumurri keenya akka wayyaanee ta’uun keenya hin ooluu” jedhee ergaa cimaa dabarse. Dhumarratis “Filannoon fillannoo caalu nageenya Ummataa mirkaneessuu dha. Filannoon osoo hin gahin karaa nagaan biyyaa tasgabeessaa” jedhee haasaa isaa goolabe!
Saba irraa dhalatan tajaajiluun akkanatti!
Weellisaafi Ogeessi Muuziqaa Oromoo Dinqisaa Dabalaa tika mootummaatiin ukkaamfamuunsaa dhaga’ame.
Ogeessi muuziqaa, walaloo barreessuf yeedaloo qopheessun akkasumas muuziqaa qindeessuudhaan beekamu, Weellisaa Dinqisaa Dabalaa kaleessaa barii tika Mootummaafi Poolisii Oromiyaatiin mana jireenyaa isaa keessaa qabamuu maatiin OMN-tti himan.
Dinqisaan Abbaa qabeenya Isidiyoo Qabsoo yeroo ta’u, Weelluuwwan warraaksaa kan qabsoo Qeerroo waggoota muraasa dura keessatti onnachiisoo ta’an hedduu qindeessee jira. Weellistoota bebbeekamoo Oromoo duubaan jabalina ta’e namni jiru kun, ji’a tokko duras mana isaatii qabamee guyyaa tokko booda hiikamee akka ture maatiin isaa himaniiru.
Kaleessa barii mana jireenya isaa keessa kan qabame Weellisaafi ogeessi muuziqaa Dinqisaa Dabalaa yeroo ammaa kana waajjira poolisii Furii keessatti hidhamee jiraachuusaa hiriyoonni isaa OMN-tti himaniiru